ပြန်ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်၏အတွေးများ [အလွန်ရှည်လျားသော POST] - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
[Extreme Long POST] ပြန်ဖွင့်တွင်ငါ၏အကြံအစည်
Thread to Link - [Extreme Long POST] ပြန်ဖွင့်တွင်ငါ၏အကြံအစည်
ငါဒီလိုမျိုးချည်ချည်ပြီးကတည်းကခဏနေပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကအကြောင်းအရာအတော်များများကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်။ ဒီတော့သူတို့ကိုမင်းတို့နဲ့မင်းတို့သူတို့ကိုမျှဝေမယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြွေးအများစုကိုငါပေးချင်တယ် Al။ ငါ (နှင့်သူ၏အခိုင်အမာ) ကျေးဇူးတင်စကားငါ abstinence ချဉ်းကပ်မှုကနေပြန်လည်ထူထောင်ရေးချဉ်းကပ်မှုမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။
ငါသည်လည်းအချို့သောအခြားကောင်းသောမိတ်ဆွေများကရက်ဒစ်ပေးချင်: tsmith1302, CidGuerreiro, JP, ပြီးသွားပါပြီ, သတ္တု, အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြ, ဂါ, High_Achiever, RedPill, မြဲမြံသော နှင့် pedigree.
နှင့်သင်တန်း၏, ဂယ်ရီ & Marniaသူတို့၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလုပ်နှင့်ရပ်ရွာမှအကူအညီတောင်း။
စကားမစပ်၊ ဒီအရာအားလုံးကိုပို့စ်အမျိုးမျိုးနဲ့ငါပြောပြီးပြီ။ ဒါကြောင့်မင်းကငါ့ကိုနောက်မှလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာမှအသစ်မရှိဘူး။
ဒီ post ထဲမှာအစပျိုးအချို့ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့အဘို့ငါကြိုတင်တောင်းပန်။ ငါထင်တာကတော့သူတို့ကငါ့မှတ်ချက်တချို့လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်၊
ရပ်ကွက်ရှိလူအများစုကဤစွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားရန်၎င်းတို့အားလုပ်ရမည့်အရာများသည်နောက်ဆုံးတွင်အရာများက 'နှိပ်' ပြီးသူတို့၏ ဦး နှောက်သည်နောက်ဆုံးပေါ် reboot ဖြစ်သွားသည်အထိယုံကြည်နေသည်။
အလွန်နည်းပါးတစ်ဦးအဖြစ်ဤကုသနေကြ စစ်မှန်တဲ့ စွဲလမ်း။ သူတို့ကပဲသူတို့ကိုချိုးဖျက်ချင်တယ်တဲ့အလေ့အထကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။
ဤသည်သာအဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့ကောင်တာကို reset နှင့်မဆိုတိုးတက်မှုအောင်မသူတို့ကိုယ်သူတို့ထရိုက်ပုတ်, လဘို့ willpower အပေါ်သက်သက်သာမှီခို, များစွာသော၏ stubborness ခြင်းဖြင့်သက်သေဖြစ်ပါတယ်။
လူအများစုကအဲဒါကိုမသိကြဘူး မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲ သူတို့၏ကျန်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအတုဆွသောစိတ်ကြွဆေးကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာ ဦး နှောက်အေးစက်၏ယူပြီး။
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အများစုဟာဒီအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းကရှိနေခဲ့ကြရတယ်၊ ၎င်းသည်ကောင်းသောအရာအတွက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် ၄ နှစ်နီးပါးကြာသည်။ ရက် ၁၀၀ သို့မဟုတ်ဘာမှရရန် ၄ နှစ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ လာမည့် GABE ဖြစ်လို 2010 နှစ်။
ငါတို့ဒီနေရာမှာအစွမ်းထက်တဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုကိုင်တွယ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဒါကိုအလေးအနက်ထားမထားဘဲ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံပြီးဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းကဲ့သို့သောပစ္စည်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
လူတွေပြန်လာတဲ့အခါ၊ သူတို့ကောင်တာတွေကိုပြန်လည်သတ်မှတ်တဲ့အခါ၊ဒီဟာကငါလုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်၊ ငါဒီတစ်ကြိမ်လုပ်တော့မယ်" ...
ဒီကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ခံရဖို့ရှိပါတယ်တစ်ခုစွဲဖြစ်ပါသည် များသော မတူညီတဲ့ထောင့်။ သငျသညျ tools များနှင့်မဟာဗျူဟာ၏အပြည့်အဝလက်နက်တိုက်အဖြစ်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအတွေးအခေါ်လိုအပ်ပါတယ်။
Willpower တစ်ယောက်တည်း shit လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး
အဘယ်အရာကိုလူတွေကများသောအားဖြင့်လုပ်ပေးရန်ကြိုးစားသူတို့လုပ်နိုင်အဖြစ်စင်ကြယ်သောအဖြစ်နေ့ရက်များစွာ go ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကရက်ပေါင်းတစ်အချို့ပမာဏ, ထို့နောက်သမျှအကြောင်းပြချက်သူတို့ပြန်သွားကြသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကကျော် Start နဲ့ပြန်လုပ်အောင်မြင်ရန်။
ဒါဟာလူအခြို့သောမှတ်တိုင်အောင်မြင်ရန်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သော 30, 90, ဒါမှမဟုတ် 100 ရက်ပေါင်းအဖြစ်အလွန်ဘုံဖြစ်ပါသည်, ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်သွားကြသည်, ထို့နောက်တဖန်တုံအရှိန်အဟုန်ရရန်မိမိကိုယ်ကိုနိုင်ခြင်းကိုရှာပါ။ သူတို့ကပြန်အစအဦးကိုသွားနှင့်သူတို့ပြေးထံမှအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့တိုးတက်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရတူသောသူတို့ခံစားကြရသည်။
တိုးတက်မှုမရှိခြင်းများအတွက်အဆက်မပြတ်စိတ်ပျက်ရှိပါသည်။ ပြည်သူ့အောင်မြင်မှုမရှိဘဲထပ်ခါထပ်ခါအတူတူပါပဲကြိုးစားနေ, လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ခံစားနေကြသည်။
အလွန်နည်းပါးသူတို့၏ပြဿနာများ၏စစ်မှန်သောအမြစ်များ addressing ကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်နည်းပါး။
သူတို့သည်“ EDIT ကိုဖယ်ရှားရန်” ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။
သူတို့က ED တိုးတက်မှုကိုမမြင်ရရင်သူတို့စိတ်ဓာတ်ကျတယ်။
သူတို့က ED တိုးတက်မှုကိုတွေ့ရင် porn session တစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထိခိုက်လိမ့်မယ်မဟုတ်လား။
အဘယ်သူမျှမအမျိုးသမီးတစ်ဦးန်းကျင်လည်းမရှိဆိုရင်သူတို့ကကြိမ်၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုကြည့်တရားမျှတ။ အမှတ်ဘာလဲဒီတော့ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူတို့က, အချိန်မရွေးမကြာမီလိင်ဆက်ဆံမဟုတ်ကြသလော
သူတို့ရဲ့ပညာရေးပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ 100 ရက်ပေါင်းသွားကြဖို့စီမံခန့်ခွဲမှီတိုငျအောငျသူတို့ချိန်းတွေ့နှောင့်နှေး။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအတိအကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမမှန်ကန်ကြောင်းစိတ်ဓာတ်၏ပထမဦးဆုံးရာအရပျ၌ဤအောင်မြင်ရန်ဘူး။
အလားတူထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်, လှုံ့ဆျောမှု, ကဲ့သို့သောအခြားရောဂါလက္ခဏာတွေသက်ဆိုင်
သူတို့ကရောဂါလက္ခဏာတွေသွားနိုင်အောင်, porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစား, ဒါကြောင့်သူတို့နောက်ဆုံးတော့ဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
အခြားအရာအားလုံးနေချိန်မှာသူတို့ကပဲ, masturbate ဖို့မကြိုးစားနေကြပါတယ် တူဖြစ်နေဆဲ.
ငါ့သူငယ်ချင်း abstinence မဟုတ်ဘဲပြန်လည်နာလန်ထူသည်။
တစ်သင့်လျော် Reboot ၏ဖောင်ဒေးရှင်း
porn စွဲသင့်ရဲ့ shitty အသက်တာ၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာသင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုလျော့ကျစေပြီးသင့်အားဖုတ်ကောင်ဖြစ်စေသည့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောအစည်းအဝေးများပြုလုပ်နေစဉ်သင့်ဘဝတိုးတက်ရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းမှုကမင်းရဲ့ဘဝကိုစုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူး။
, ဒီသင်သည်သင်၏ပြဿနာများအတွက်ညစ်ညမ်းအပြစ်တင်ရပ်တန့်ရန်ရှိသည်, နားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ပေးပါ။
Porn သည်သင်နှောင့်နှေးခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ porn သည်သင်စိတ်ဓာတ်ကျရသည့်အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါ။ သင်အထီးကျန်နေသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ Porn သည်ကိုယ်အလေးချိန်သို့မဟုတ်ကြွက်သားများမရရှိနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါ။
သငျသညျအဖြစ်မှန်မှလွတ်မြောက်ရန် porn ကြည့်ရှုပါ။ သင်သည်သင်၏စိတ်ခံစားမှုကိုစီမံရန် porn ကိုကြည့်သည်။ သင်ငြီးငွေ့နေသော၊ အထီးကျန်၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ ညစ်ညမ်းသောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်အခြေအနေများကိုအစားထိုးရန်အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်၊
ဤသည်သဘာဝကျကျကွာ porn မှသင်၏စိတ်ကိုဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်။
သင်စတင် reboot လုပ်ပြီးကတည်းကသင့်ဘဝတိုးတက်လာသည်နှင့်တိုင်းတာသည်။
ဤသူသည်သင်တို့မှ (အကြွေးပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘာလဲ RecoveryNation):
အဆင့် #1: ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အသက်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုသင်
သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်, လ, သို့မဟုတ်ယခု မှစ. အနှစ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်သလဲ?
ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားတစ်ခုလုံးတစ်နေ့ (သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်) ဖြုန်းနေကြတယ်။
သင်တိုငါ့ကိုပြောပြကြသည် အဘယ်သူမျှမသဲလွန်စ သငျသညျအောကျပါအဒေသများတွင်မဆိုချင်သောအရာကို: လေ့လာမှု, အလုပ်, မိသားစု, သူငယ်ချင်း, ဝါသနာ, ကျန်းမာရေး, etc?
အရူးလိုရေးပါ။ သင်လိုချင်လျှင်စာမျက်နှာများစွာရေးပါ။ မင်းရဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုဘယ်လိုမျှော်မှန်းမလဲဆိုတာမင်းရဲ့ဂျာနယ်မှာမင်းလုပ်ခဲ့သမျှအကြီးမားဆုံး post ကိုလုပ်ပါ။
ယခုဘဝရူပါရုံကိုသင့်ရဲ့ reboot ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါဟာသင်ယခု မှစ. 100% အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။
သင်၏မျက်စိပိတ်လိုက်ပါ။ ဒါဟာမြင်ယောင်။ ချရေးပါ။
သင်ဘဝ၌သင်ဘာလိုချင်ကြောင်းမသိလျှင်၊ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲခြင်းထက်အမှန်တကယ် ပို၍ လေးနက်သောပြissueနာဖြစ်သည်။
မှတ်စုစာအုပ်ကို ယူ. တစ်ပန်းခြံကိုသွားပါ။
အဆင့် #2: သင်၏အသက်တာကိုရူပါရုံကိုမှအရေးတကြီး Give
အိုကေအခုမင်းဘဝမှာလိုချင်တာကိုသိပြီ။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်လေ့လာရမည်ကိုမသိခြင်းကဲ့သို့သောအချို့သောနေရာများတွင်မသေချာသော်လည်းသင်အဆင်ပြေပါသည်။ အနည်းဆုံးသင်သည်သင်၏အသက်တာကိုယခုအချိန်တွင်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်။ ဒါအရမ်းအရေးကြီးတယ် သင်သည်သင်၏ဘဝလမ်းညွှန်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်တစ်ခုခုဆီသို့ ဦး တည်ရန်လိုအပ်သည်
ဒီမှာပြproblemနာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာအားလုံးကိုသိသော်လည်း၊ ငါတို့ကပန်းတိုင်တွေနောက်ကျအောင်ကျွမ်းကျင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်သစ်သို့ (သို့) တစ်လ၏အစသို့တိုင်အောင်အခြေအနေများကောင်းမွန်လာသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရသည်။
မင်းပေးမယ် အရေးတကြီး သင်၏အသက်တာရူပါရုံကိုရန်။
အဲဒီအကြောင်းအခြားကြီးမားသော post ကိုသို့မဟုတ်ဂျာနယ် entry ကိုပြုလုပ်ပါ။
မင်းအသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီဆိုပါစို့၊ မင်းမှာအလုပ်မရှိ၊ ကားမရှိဘူး၊ မင်းမိဘတွေနဲ့အတူနေပြီးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတာတစ်နေ့လုံးကုန်ဆုံးနေတယ်။ ဘာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုခုမလုပ်ခင်အချိန်ပိုစောင့်ရမှာလဲ။ ဒါကအရေးပေါ် bro ဖြစ်ပါတယ် မင်းက ၂၇ ကောင်ဖြစ်နေပြီ။
ဒါမှမဟုတ်မင်းအရင်ဘဝမှာမင်းမှာရည်းစားမရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ကောင်းပြီ၊ မင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ ကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေ ၀ ယ်ပါ၊ မကြာခဏထွက်သွားပါ၊ အမှားတွေလုပ်ပါ၊ ငြင်းပယ်ပါ။ NOW ကအတွေ့အကြုံအချို့ရပြီ။
မင်းခါးနာနေတယ် ၎င်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ မစောင့်ပါနဲ့ ပိုပိုပြီးစောင့်လေလေ၊ ယောဂကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေကူးခြင်းစတင်ပါ။ သင်၏တင်ပါးများကိုနေ့တိုင်းရွှေ့။ အမြဲတမ်းပြန်လာပါ။
သငျသညျအခုအချိန်မှာသင်၏အသက်ကိုရူပါရုံကိုလိုက်ရှာ start ရမည်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေချရေးပါ။
သင်ရုံကနှောင့်နှေးစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေတိုးတက်စေရန်စောင့်ဆိုင်း။ ရောက်လာရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုစောင့်ဆိုင်း။ နှစ်သစ်ရဲ့အစကိုစောင့်ဆိုင်း။
အဆင့် #3: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ခု indestructible ယုံကြည်ချက်ထုတ်လုပ်မည်
Arnold Schwarzenegger နဲ့တူအောင်မြင်သောလူတွေကိုသူတို့တစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်ချင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါသူတို့ကလုံးဝဖြစ်လာ အစွဲအလမ်း အဲ့ဒီအကြောင်း။ သူတို့ကသူတို့ကအောင်မြင်ရန်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဦး indestructible ယုံကြည်ချက်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်မင်းကဂစ်တာတီးတတ်ပုံကိုသင်ယူချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ပြီးတော့သင်လုပ်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ကအချိန်ယူတတ်တယ်ဆိုတာသင်သိသောကြောင့်၊ သငျသညျယခုစတင်ရန်ရှိသည်။
သို့သော်၊ ရက်အနည်းငယ်သင်ကြားပြီးနောက်သင်စိတ်ဓာတ်ကျလာပြီးစိတ်ဓာတ်ကျလာသည်။ ဂစ်တာတီးခြင်းသည်လုံးဝမလွယ်ကူကြောင်းသင်နားလည်သည်။ သင်မည်သည့်အလေ့အကျင့်တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်လွှမ်းမိုးနေသည်ဟုခံစားရသည်။ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယဝင်လာတယ်၊ငါဟာဂစ်တာသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးငါ့ကိုယ်ပိုင်တီးဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ငါလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး“ သူငယ်ချင်းများကမင်းကိုပြောတာကDude, မင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစပြီးလုပ်သင့်တယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဂစ်တာသမားတွေဟာငယ်ငယ်ကတည်းကစခဲ့တယ်"။
၎င်းသည်သင်၌အားနည်းသောယုံကြည်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ သင့်မှာဂစ်တာသမားကောင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူး။ ဘယ်သိသာလုံးဝမှားယွင်းသောသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်အတိုင်းအဆမဲ့အလားအလာရှိသည်။
အာနိုး Schwarzenegger ဤကဲ့သို့သောမထင်ပါဘူး
'ဒါမလုပ်နိုင်ဘူး'၊ 'ဒါမလုပ်နိုင်ဘူး'၊ 'တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး' ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြားဖူးဘူးလဲ။ တစ်စုံတစ် ဦး က 'ဘယ်သူမှဒီလိုမလုပ်ဖူး' လို့ပြောရင်ငါအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလုပ်ရင်အဲဒါငါလုပ်ဖူးတဲ့ပထမဆုံးလူပဲ။
ကျနော်တို့ကကျနော်တို့ယုံကြည်သို့နေ့တိုင်းကိုယျ့ကိုယျကိုဉီးနှောကျလြျှောဖှတျခွငျးရန်လိုအပ်ပါတယ် ပါလိမ့်မယ် ထိုသို့ပြု နေပါစေဘယျအရာ.
ဤရွေ့ကား3ခြေလှမ်းများအညီအမျှအရေးကြီးလှသည်။
သူတို့ကို skip မထားပါနဲ့။
သူတို့ကသင့်ရဲ့ reboot ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ကဤမျှလောက်ပိုမိုလွယ်ကူကို restart လုပ်ရမည်။ သင့်ရဲ့စိတ်သဘောကိုသင်တို့အသက်တာ၌လိုချင်တာတွေအပေါ်လုံးဝအာရုံစိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ပြဿနာများ၏အမြစ်ကိုပြုပြင်တာတွေပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ shitty ဘဝအကြောင်းကိုတိုင်ကြားချက်ရေးသားချက်များကိုရပ်တန့်။ ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်သင်ဘယ်လိုနေမကောင်းလဲဆိုတာကိုပို့စ်တင်တာကိုရပ်လိုက်ပါ လုံးဝ porn အကြောင်းပြောနေတာကိုရပ်လိုက်ပါ။
အဲဒီအစားတစ်ဦး Self-တိုးတက်မှုဂျာနယ်သို့သင့်ရဲ့ဂျာနယ်မှာအသွင်ပြောင်း, သင်လိုချင်တဲ့ဘဝဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားအပေါ် 100% အာရုံစူးစိုက်။
porn အကြောင်းကို "မေ့လျော့" ။
ဤသည်မှာအခြေခံပြန်ဖွင့်သည့်အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်လူအများကဤစည်းမျဉ်းကိုအဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်နေကြသည်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသောနံနက်ခင်းများ၊ နံနက်တောအုပ်များ၊ အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းများအကြောင်း၊ သူတို့ဘယ်နေ့ရောက်နေပြီ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်ရှောင်ကြဉ်ရန်ရုန်းကန်နေရပုံ၊ ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိရောက်ရန်မစောင့်နိုင်ပုံစသည်တို့ကိုရေးသားကြသည်။
သငျသညျတသမတ်တည်းသင်လိုချင်တဲ့ဘဝတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ် 100% အာရုံစူးစိုက်လိုက်တဲ့အခါ, သင့်စိတ်ထဲသဘာဝကျကျကွာ porn ကနေရွှေ့မည်။ သင်တို့သည်လည်းအလွန်အစစ်အမှန်ဖြစ်သော porn, ဖြတ်ခြင်းဖြင့်ကျန်ကြွင်းရစ်သောပျက်ပြယ်လျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
လူအတော်များများသာကိုင်တွယ်ရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းယခုဘဝအနတ္တထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုရှာဖွေ porn ဖြတ်။ ထိုအခါသူတို့ကဒီကိုပယ်သောသူတို့အဘို့လွန်းဖြစ်ပါတယ်တိကျစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ကျောညစ်ညမ်းသွားပါ။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဘဝကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါကပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်မှုသည်စိတ်ဓာတ်မကျပါ။ ဖြစ်ချင်တော့၊ သင်လိုချင်တာကိုအာရုံစိုက်လေလေ၊
သင်၏ဘဝရည်မှန်းချက်နှင့်သင်၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အရေးကြီးသည်မှာ“ မဟုတ်ပါ”ငါအလုပ်များနေပြီးညစ်ညမ်းခြင်းကိုမကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပြည့်စေရမည်“ ဒါဟာသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲ။
porn နှင့် ပတ်သက်. ranting ရပ်တန့်။
ဤသူကား အမှား #1 ငါ၏အ post ကိုမှသည် reboot လုပ်ပါထိပ်3အမှား.
porn စွဲရုံမတရားသောနှင့် relapsing လာပြီထက်အများကြီးပိုပါတယ်။
သငျသညျ porn ဖြတ်တက်ကြီးထွားလာပြီးအများကြီးပိုရင့်ကျက်သူတစ်ဦးဖြစ်လာအကြောင်းကိုကြောင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိပေးရန်ရှိသည်။
အဲဒါထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ငါ ED ကိုပျောက်ကင်းစေနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်အတူလိင်များများရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်!"။
ကျနော်တို့ porn ၏လိုအပ်မှုမရှိဘဲအသက်နှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုကိုင်တွယ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
ငါကိုးကားသွားမယ် recovery ကို Nation ဒီမှာ:
"လူတို့သည်မဖြစ်မနေမှပြန်လည်နာလန်ထူ (သို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်သောအပြုအမူမှအခြားသို့ပြောင်းလဲခြင်း) သို့ကူးပြောင်းသည့်အခါလူများကြုံတွေ့ရသောဒုတိယဘုံကျော့ကွင်းသည်ကျန်းမာသောအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏အချည်းနှီးသောအဆင့်တွင်ပါ ၀ င်သည်ဟူသောသူတို့၏အမြင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနားလည်ရန်လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ ၌စွဲလမ်းစေသည့်ဖြစ်စဉ်ကိုအတိုချုပ်ကြည့်ကြစို့။ စွဲလမ်းမှုအများစုတွင်ထိုသူသည်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုစီမံရန်သူတို့၏စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူပေါ်မူတည်သည်။ ဤလူသည်ထိုကဲ့သို့သောပုံစံများအပေါ်မှီခိုလေလေ၊ ဤပုံစံသည်ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီးအမြစ်တွယ်လာသည်။ ယခုဤအကြောင်းအရာသည်အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်နောက်ဆက်တွဲပြissuesနာများစွာကိုဆွေးနွေးရန်ရှိသော်လည်းအဓိကအချက်မှာ - စွဲစွဲလမ်းမှုမရှိပါက၎င်းတို့သည်အလွန်တကယ့်လက်တွေ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်ပြယ်မှုတစ်ခုနှင့်ကျန်နေတော့သည်။ နှင့်အလွန်မသက်မသာ။ ဒီထောင်ချောက်ကိုသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုဟာသူတို့ရဲ့ဘ ၀ မှာသဘာဝ၊ လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြခြင်းဖြစ်တယ်။ သူတို့သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအချည်းနှီးဖြစ်မှုကိုစတင်ခံစားရသည်။ ထိုသူတို့ကတစ်ခုခုမှားယွင်းနေသည်။ သူတို့ပုံမှန်ခံစားရရန်သူတို့၏စွဲလိုအပ်ကြောင်း ပြီးတော့ဒီမှာ porn, ဒါမှမဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ကိစ္စရပ်များလာပါတယ်။ ပြီးတော့, ညာဘက် cue အပေါ် ... ဒီမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အပျော်အပါးနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုလာပါတယ်။ အပြစ်ရှိသည်နှင့်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူး သူတို့ကဘာမျှမခံစားရရန်ထက်, စိတ်ခံစားမှုအားလုံးခံစားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်, relapse တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ငါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်ဆေးဝါးများသောက်သုံးခြင်းထက်ငါအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးနိမ့်ကျမှုကိုခံစားရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ရုန်းကန်မှုများတစ်လျှောက်အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားမိခြင်းကိုမှတ်မိသည်။ ငါမကောင်းတဲ့ခံစားကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါဘူး။ ငါ့ဘဝရဲ့ပရမ်းပတာဖြစ်မှုကိုငါဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူး။ နာကျင်မှုမဟုတ်သလိုနာကျင်မှုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငါအစစ်အမှန်တွေ့ကြုံခံစားရတာဟာငါ့စွမ်းရည်ပဲလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအစွမ်းကုန်တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောကြောက်ရွံ့မှုမှာဘာမျှမခံစားရရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူနှင့်အတူရုန်းကန်သူများစွာနှင့်အတူဘုံဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုသည်ဟုဖော်ပြသူများသို့မဟုတ်အတိတ်ကအလွဲသုံးစားမှုများ၊ ဖိစီးမှုများစွာတို့ကို“ နာကျင်ကိုက်ခဲစေရန်” ကြိုးစားသူများကိုပင်တိကျမှန်ကန်မှုမရှိပါ။ သူတို့သည်သောက်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း (သို့) အခြားနည်းဖြင့်သူတို့ကြုံတွေ့နေရသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ ၎င်းတို့ကိုမှေးမှိန်စေသည်မဟုတ်။
ဒီအချက်ရိုးရှင်းပါသည်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအစွန်းရောက်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သော compulsive အပြုအမူကိုခံစားနေရသောတစ်စုံတစ် ဦး အား၎င်းတို့၏အစွန်းရောက်မှုကိုစိတ်ခံစားမှုပြုရန် - အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအဆုံးသတ်မှုနှင့်အတူပါလာသည့်အချည်းနှီးဖြစ်မှုသည်အလွန်များပြားနိုင်သည်။ သင်၏စိတ်ခံစားမှုအများစုကိုစီမံခန့်ခွဲသောအမူအကျင့်ပုံစံများကိုဖယ်ရှားသည့်အခါရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ ပျက်ပြယ်မှုသည်သင်၏စိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တူသည်။ သင်သည်ပုံမှန်မဟုတ်ဟုမခံစားရတော့ပါ။ သင့်အတွင်း၌အမှားတစ်ခုခုရှိသကဲ့သို့ခံစားမိသည်၊ သငျသညျတစ်နည်းနည်းနဲ့ကျိုးပဲ့ကဲ့သို့။ ဒီမလုပ်မနေရပြုမူတဲ့အပြုအမူတွေမရှိရင်ဘဝဟာတောင်ရှင်သန်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးလို့တောင်သင်ခံစားမိလိမ့်မယ်။ ဤအပြုအမူများသည်သင့်ကိုထူးခြားစေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အပြုအမူ (အပြစ်ရှိမှု၊ အရှက်ခွဲခြင်း၊ ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ အထီးကျန်မှုစသည်တို့) ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများပင်စိတ်ခံစားမှုလုံးဝမရှိခြင်းထက်ပိုကောင်းသောကြောင့်မလွှဲမရှောင်သာသင်သည်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်းသို့ပြန်သွားသည်။"
"ပြန်လည်နာလန်ထူမှု၏ဒုတိယဘုံလှုံ့ဆော်မှုမှာ 'ကျောက်အောက်ခြေ' ကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်တွေ့အသုံးအနှုန်းများအရစွဲလမ်းမှု၏နာကျင်မှုကိုစွဲလမ်းမှုအားဖြင့်ရေတွက်။ မရတော့သည့်အမှတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှု၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများသည်အလွန်ကြီးထွားလာပြီးသည့်အခါစွဲလမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုသည်စွဲလမ်းမှုသည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ထက်သိသိသာသာပိုမိုအားကောင်းစေသည့်လှုံ့ဆော်သူဖြစ်သော်လည်းရေရှည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွင်ရှုံးနိမ့်ခြင်းအတွက်လည်းအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်၎င်းသည်ရေရှည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း / ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသံသရာအတွက်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်လာသနည်းဤအချက်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုသည်မပြင်းထန်သောအပြုအမူများဖြင့်ခဏတာစီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်ကြီးသောအခါနာလန်ထူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ထိုနာကျင်မှုကိုစီမံရန်ကူညီသည့်ပြင်းထန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြှင့်တင်မှုကိုပေးသည်။ လူကကောင်းတယ် ထိုခံစားမှုသည်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာနိုင်သည်၊ လပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့မလွှဲမရှောင်မေ့သွားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မှုကပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ကတိကဝတ်နဲ့အတူလာပြီးလူတစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထပ်မံတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ စွဲ (သို့မဟုတ်အခြားစွဲ) သို့ပြန်သွားခြင်းသည်သူတို့၌ရှိသောတစ်ခုတည်းသောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာပြန်လည်နာလန်ထူရန်ပြန်လည်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းဖြင့်နောက်တွင်ထပ်မံဖြစ်ပွားပြန်သည်။ နောက်တစ်ခုကသင်စိတ်ကူးရသည်။ ၎င်းကိုအဆုံးသတ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုပြောင်းလဲသွားသည်အထိသံသရာသည်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပါ။
တခြားသူတွေရဲ့မျက်နှာကို ထောက်. ပြန်လည်ထူထောင်ကြသူတွေထက်အများကြီးပိုကောင်းသူတို့ရဲ့စွဲခ၏နာကျင်မှုအဆုံးသတ်တဲ့အလိုဆန္ဒအားဖြင့်လှုံ့ဆော်သူများ။ ထိုသို့သောတစ်ဦးချင်းစီစဉ်ဆက်မပြတ်ရေရှည်နာလန်ထူအားထုတ်မှု generate နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျန်းမာရေးကိုစစ်မှန်တဲ့အကူးအပြောင်းစေနိုင်ဖို့အတွက်သော့ချက်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ကနဦးအဆင့်များတွင်အတိတ်ရွှေ့သူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်အောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုကျန်းမာဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များချမှတ်ရန်စတင်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တှငျတှေ့ရလိမျ့မညျ။
ဒါကြောင့်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်သင့်လမ်းပြင်ဆင်နေအတွက်သင်အထဲမှာဗလာခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့အခါအချိန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူစတင်များ၏ Euphoria ပီတိပြီးနောက်ရောက်လိမ့်မည်, သင်ကသင်၏အသက်တာကကြောင်းလမ်းကိုဆက်လက်ရန်သင့်အလိုဆန္ဒအဆုံးသတ်ထားကြပြီပြီးနောက်ကလာပါလိမ့်မယ်။ ဤကာလအတွင်းကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာရှည်စေခြင်းငှါ, ရက်အနည်းငယ်ကြာရှည်စေနိုင်သည်။ ခဲ, ကအစဉ်အဆက်မဟုတ်တော့ကြောင်းထက်ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း, သင့်ရည်မှန်းချက်ကိုဤအနတ္တကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ဖြစ်, နှင့်တန်ဖိုးများနှင့်အသင်တို့အထဲ၌ယုံကြည်သောအိပ်မက်အတူကဖြည့်စွက်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။"
ကျနော်တို့ပြန်သွားကြသည်အကြောင်းရင်းတွေထဲကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းကိုနားလည်ရန်လိုအပ် ငါတို့ကအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်တွေကိုမကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ pussies တွေပါ.
ကျနော်တို့ဆေးဝါးအဖြစ် porn ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့ကွာဘဝကနေဖျောက်ရန် porn ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဖိစီးမှု, အထီးကျန်ဆန်, ပျင်း, အမျက်ဒေါသမှ porn ကိုသုံးပါ
နောက်တစ်ဖန်စာမဖတ်လျှင် reboot လုပ်ပါထိပ်3အမှားယခုထိုသို့ပြုမှကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
porn မသုံးဘဲသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနှင့်သင်ရရှိပါလိမ့်မည် ရေရှည် အောင်မြင်မှု။
စကားမစပ်, recovery ကို Nation ကြောက်မက်ဘွယ် fucking ဖြစ်ပါတယ်။
သင် porn မှထွက်ခွာသွားသည့်အခါသင်တုန့်ပြန်မှုအတုကိုကောင်းကောင်းနုတ်ဆက်ပါတယ်။
သင်က“ ကြီးမားသော tits နှင့်မြည်းများနှင့်အတူပူပြင်းတဲ့ကြက်များ၏စီးဆင်းမှုကိုဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်” သောကမ္ဘာကြီးကိုထားခဲ့ပြီးပြီ။
ရီးရဲလ်အသက်ပေတည်း ဘာမြှ တူ။
ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညူးခြင်း ကျွန်ုပ်တို့မှာကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုများစွာရှိသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၏သော့ချက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
အဆိုပါပြဿနာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် လောက်မရှိတဲ့ခက်ခဲများနှင့်လက်တွေ့မ "ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်ပူသောအသားများကို fuck ဆိုတဲ့" ရန်။
ထိုရည်မှန်းချက်ထားရှိခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ဘာမှမမှားပါ၊ သို့သော်သင်အံအားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုသည်။ သငျသညျရာပေါင်းများစွာငြင်းပယ်ခံရဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်။ ဘောလုံးတွေအများကြီးလိုတယ် ၉၉.၉% သောယောက်ျားသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြောက်လန့်နေသောအရာများကိုသင်လုပ်ရမည်။
ကျနော်တို့တင်းကျပ်စွာဆင်မြန်းပေါ်ဤအကြောင်းစူပါပူငှာကွိမျမြင်ကျနော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှော်လင့် တစ်နေ့နေ့မှာ ကျွန်တော်သူတို့နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ seductive အကြောင်းကိုစာအုပ်တွေဖတ်ပါ။ ကျနော်တို့ PUA ဖိုရမ်များသို့သွားရောက်။ ကျနော်တို့မိန်းကလေးငယ်များချဉ်းကပ်ယောက်ျားတွေ၏ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုများကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့သီအိုရီစေနှင့်အွန်လိုင်းသူတို့ကိုဆွေးနွေးပါ။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအကြောင်း shit လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။
အားလုံးအိပ်မက်ပဲ။ ငါတို့စိတ်ထဲရှိအတွေးတစ်ခု။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်တစ်ခုခု တစ်နေ့နေ့မှာ ကြှနျုပျတို့သညျပွုပါမညျ။
တစ်ဦးကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသူဆွဲဆောင်မှုတွေ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံ, ဒါကြောင့်သူကသူမ၏ထွက်မေးတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုသိလာအောင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ထိုအခါသူတို့က ထွက်. ဆက်ဆံရေးအချို့သောမျိုးဖွဲ့စည်းရန်ဆက်လက်။ ထိုအခါအချို့သောလအကြာဆက်ဆံရေးအလေးအနက်ဖြစ်လာသို့မဟုတ်ဆိတ်ကွယ်ရာကျရောက်သော်လည်းကောင်း။
သငျသညျကြီးမားသောအရေးယူရန်ဆန္ဒရှိ (နှင့်ငါအကြီးအကျယ်ဆိုလို) သင်သည်မဟုတ်လျှင်, သင်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့များစွာသောမိန်းမအနီးဘယ်နေရာမှာမဆို fuck ဆိုတဲ့မည်မဟုတ်လျှင်, သင်လက်ခံဖို့ရှိသည်။
ဒီမှာဘယ်သူမဆိုရည်းစားရဖို့ထက်ပိုပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မိန်းကလေးများသည် pornstar များနှင့်မတူနိုင်ပါ၊
လိင်သဘာဝသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုနိုင်ပါ။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ်။ တချို့ရက်တွေမှာမင်းရဲ့မိန်းကလေးဟာ sexy ဖြစ်မယ်၊ တစ်ချို့ရက်တွေမှာတော့သူမစိတ်ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်။ တချို့ရက်တွေကခက်ခဲအောင်သင်ရုန်းကန်နေရတော့တယ်၊ သူကအော်ဂဇင်ကိုရနိုင်မယ်၊ သင်သည်အခြားနေ့တိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်တစ်လလျှင် ၃-၄ ကြိမ်သာလုပ်နိုင်သည်။
သတိရပါ၊ ညစ်ညမ်းသောကြယ်များကိုသူတို့ပြောသည့်အတိုင်းလုပ်ရန်နှင့်သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ပေးသည်။
ငါသည်ဤလကျခံဖို့အလွန်ခက်ခဲသည်ကိုသိ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ fuck ဆိုတဲ့ပူငှာကွိမျအပြင်ဘက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာမှအဓိပ်ပာယျကိုပေးပါရန်ရှိသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှုသည်၎င်းပေါ်တွင်မတည်ပါ။ မဟုတ်ရင်မှန်ကန်တဲ့ဘဝမှာသင်မကျရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းသင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လာနိုင်မှာပါ။ သင်၏အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးသင်သည်“ ပူပြင်းသောအသားများဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှု” နှင့်ဆက်နွှယ်နေလိမ့်မည်။
သူတစ်ဦးရှိခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂါထိုသို့သောယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်နေ reboot ဖြစ်ပြီးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် နှလုံး၌နက်ရှိုင်းသောပြောင်းလဲမှု။ ဒီအားဖြင့်ငါသည်သူ၏ချဉ်းကပ်မှုလုံးဝအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်းဆိုလိုတာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တပ်မက်ခြင်းမရှိ၊ သူသည်လိင်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုနှင့်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ကြည့်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူ့စိတ်ကိုမဖြတ်နိုင်တော့ပါဘူး။
အခုတော့သူဟာမင်းလိုသူလိုပဲစဉ်းစားရမယ်လို့ငါမပြောဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းကလိင်နဲ့မိန်းမတွေကိုဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာသေချာပေါက်ပြောင်းလဲသင့်တယ် ဒါဟာလုံးဝညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ယိုယွင်းပျက်စီး.
ငါသည်လည်းဆက်ဆံရေးအခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူသင်၏အသက်ကိုမျှဝေအကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။ ငါသူတို့နောက်ဆုံးတော့အလောင်းတော်ထားတဲ့စတင်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးနက်ရှိုင်းသွားရနိုင်အောင်ဤနေရာတွင်လူအတော်များများဟာရည်းစားချင်ငါသိ၏။
ဒါဟာသည် reboot ချနှေးကွေး masturbate ဖို့တိုက်တွန်းတိုးပွါးနှင့် porn နှင့်ပတ်သက်သောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအား။
ကအသက်တာ၌ကအခြားလှုပ်ရှားမှုများဆီသို့ဦးတည်ပြောင်းလဲရပါမည်သည့်အခါက fuck ဆိုတဲ့, သင့်စိတ်ထဲလိင်, tits, မြည်းပေါ်အာရုံစူးစိုက်တတ်၏။
သင်ကိုယ်တိုင်လိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရှာတွေ့ပါကသင်သည်သတိနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာအခြားအရာတစ်ခုခုရန်သင့်အာရုံကို redirect သငျ့သညျ။
သင်ဤမလွှဲမရှောင်သငျသညျပြန်သွားကြသည်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့်, သင်အော်ဂဇင်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်လိင်နှင့်အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုစဉ်းစားမရနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာကူးယဉျသို့မဟုတ်ငှာကွိမျ၏ရုပ်ပုံများမှာ peeking နေချိန်မှာရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားနေသာစိတ်ပျက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
ဝေးဝေးနေ မည်သည့် အတုဆွမျိုး။ မျက်နှာမပျက်နဲ့ အွန်လိုင်းမှမိန်းကလေးများ၏ဓါတ်ပုံများကိုမကြည့်ပါနှင့်။ Google ပုံရိပ်ရှာဖွေရေးတွင် pornstar အမည်များကိုမထည့်ပါနှင့်။ အစောင့်အကြပ်ဖိုရမ်များကိုမဖတ်ပါနှင့်။
အခြေခံအားဖြင့်“ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ချရန်ကြိုးပမ်းရန်ကြိုးစားနေခြင်း (ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ မိန်းကလေးများကိုစာပို့ခြင်း၊ ရက်စွဲများထွက်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခံရခြင်း) သို့မဟုတ်လိင်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း - လေ့လာခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ပျော်ခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း၊ တူရိယာတီးခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများ၊ အိမ်စာကြည့်ရှုခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း။ ”
သင်တစ်ဦးတည်းလိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမိန်းကလေးတွေထွက်စစ်ဆေးနေတဲ့အဘယ်သူမျှမမီးခိုးရောင်ဧရိယာရှိပါသည်။ ဤသည်ဘာမျှမစုံ။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကိုယ်ကသာ, ရမ္မက်တိုးမြှင့် relapse ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ, သင်စိတ်ပျက်စေမည်။
အဖြစ်မကြာမီခေါ်ဆောင်သွားအတွေးများကိုသငျ့စိတျထဲမှာပေါ်လာအဖြစ်, သင်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုပြီးတခြားအရာတစ်ခုခုကိုရန်သင့်အာရုံကို refocus သငျ့သညျ။ သင်ကကျွမ်းကျင်သည်အထိအစဉ်အမြဲဒီအကျင့်ကိုစောင့်ရှောက်။
သငျသညျညာဘက်အမြစ်ကနေဒီစွဲတိုက်ခိုက်ရန်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမြဲတမ်းစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်တွေးတောနေပါက hardcore porn ကိုရှောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ဘာမျှမပြီးမြောက်ပါ။
အဲဒါကို“ Monk Mode” လို့ခေါ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းက celibate ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ဆိုလိုတာကြောင့်ငါအဲဒီနာမည်ကိုမကြိုက်ဘူး။
ဤသည် celibate ဖြစ်လာဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ဆိုင်ရာအကြံအစည်များအပေါ်စိတ်စွမ်းအင်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းအစားသင်ထပ်မံဖြစ်ပွားရန်အခွင့်အလမ်းများကိုသာတိုးတက်စေမည့်အစားသင်အလောင်းထားလိုလျှင်လိုအပ်သည်ကိုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုသင်အောင်မြင်ချင်ပါက၊ မိန်းကလေးငယ်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှု။ မရ၊ နံနက်ယံ၌ထသောအခါသင်သည်စိတ်ကူးယဉ်။ မရပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ ၅ စက္ကန့်ကိုကြည့်လို့မရဘူး။
သင်သည်ထိုအရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဤစွဲလမ်းမှုဟုခေါ်သောကြီးမားသောသားရဲသည်သင်၏ prefrontal cortex ကိုထိန်းချုပ်လိမ့်မည်။ သင်မပြန်မီအချိန်သည်ပြaနာဖြစ်သည်။
သင်၏အသက်တာရူပါရုံကိုအပေါ် 100% သငျ့စိတျအာရုံစူးစိုက်။
တိုင်း ... .single ... .day
ဤနေရာတွင် bigbookofpenis (lol, nice username) မှဖန်တီးသောဤနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ချည်နှောင်ထားသည်။
အဖြစ်မကြာမီသူတို့သည်သင်၏စိတ်တွင်ရောက်ရှိမည်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားအတွေးများကိုဖယ်ရှား relapses တားဆီးများအတွက်အုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာသင်တပ်မက်သောအရာကို Orgasm မဟုတ်ပါဘူး
သငျသညျ porn မတရားသောရသည့်အခါ, သင့်ဦးနှောက်ကိုအော်ဂဇင်တောင်းသည်မဟုတ်။ တစ်ဦးစှဲလမျးသူကြောင့်သင့်ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်အဘို့အသငျသညျတောင်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားသော, အ tits, မြည်း, အအသစ်အဆန်း, ထိုအလုအယက်သည်လက်တွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကး, အစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း, စူပါပူငှာကွိမျ, စုံလင်ကင်မရာရိုက်ချက်များသွားခွင့်များနှင့်အပျော်အပါးကျူးလွန်၏ခံစားချက်, အ fuck ဆိုတဲ့, အ cumshots လွဲချော် အဆိုပါ doggystyles, အ Boob ခန့်စသည်တို့ကိုလမ်းညွှန်
အော်ဂဇင်မရှိခြင်းပြဿနာကြီးလျှင်, လူတိုင်းကိုကိုယ့် porn (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်တုဆွ) မပါဘဲ FAP လိမ့်မယ်။ မရှိ relapses ပါလိမ့်မယ်လူတိုင်း 500 + နေ့ကကောင်တာရှိလိမ့်မယ်။
သငျသညျ edging သို့မဟုတ်အဆက်မပြတ်ကူးယဉျ, peeking start တစ်ချိန်ကသာ ejaculate ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့အစစ်အမှန်ပြဿနာဖြစ်လာသည်။ သငျသညျ arousal တစ်ပြည်နယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာဒါဆိုသိသာသင်ဖြစ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်ကန ဦး တိုက်တွန်းချက်များမှာ“ စွဲလမ်းမှု” ဖြစ်သည်။ သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ သူတို့သည်သုတ်ရည်လွှတ်မှုအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဤတိုက်တွန်းချက်များကိုအစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်ကြည့်လျှင်၊ ၎င်းသည်ရေကူးဝတ်စုံဝတ်သောပူပြင်းသောကလေးငယ်များ၏ရုပ်ပုံများဖြစ်သည့်တိုင်သူတို့သည်သင့်စိတ်ထဲ ၀ င်ရောက်ပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်းစသည်တို့ကိုသင့်အားဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်“ autopilot” mode ပါဝင်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ဘာဆက်ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။
သင့်အား cum လုပ်ရန်တိုက်တွန်းမှုမရှိပါ။
သင်က“ မြင့်” နှင့်“ အလျင်အမြန်” လုပ်ရန်တိုက်တွန်းမှုများရှိသည်။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဖြစ်တယ်, သင်ကမပါဘဲအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်, မသက်ဆိုင်သင်တစ်ဦးရည်းစားရှိမရှိ၏သို့မဟုတ်မ.
သငျသညျရက်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ပတ်ရှောင်ကြဉ်တဲ့အခါ, ထိခိုက်မခံတဲ့လမ်းကြောင်းစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘယ်လောက်ပဲတိုတိုသို့မဟုတ်အကျဉ်းမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ လူတွေမှားယွင်းစွာ porn မတရားသောနှင့်အတူစစ်မှန်သောလိင်စိတ်ရှုပ်ထွေးဘယ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဟာ 15 ရက်အကြာမှာ porn မှာ peek ယူ. သူတို့ကဒီပြင်းထန်သောအလုအယက်ခံစားရနှင့်ဖြစ်ချင်တိုက်တွန်းဒါကြောင့်သူတို့ကလိင်စိတ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဖိအားသက်သာရာရမယ်ကြောင်းကိုကောက်ချက်ချ။
အဆိုပါပြproblemနာကိုပထမ ဦး ဆုံးဌာန၌ peek ယူပြီးခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့အစား ပို၍ အရေးကြီးသောအရာများကိုသာအာရုံစိုက်ပါကနေ့ကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြီးပြproblemနာမရှိဘဲပြီးအောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည် fantasizig ကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ပြီးအွန်လိုင်း (မည်သည့်ပုံစံဖြင့်) မဆိုကြက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းပြုလျှင်၊ orgasm မပါဘဲကြာမြင့်စွာသွားခြင်းသည်ပြbeနာမဟုတ်ပါ။
သင်၏အသက်တာရူပါရုံကိုအပေါ် 100% အာရုံစိုက်ပါ။
ကောင်တာ vs စာရင်းဇယားများ
အောက်ပါအကြံပေးချက်သည်အထူးသဖြင့်ကောင်းမွန်စွာပြေးရန်အခက်အခဲရှိသောအသင်းသားများကိုရည်ရွယ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုလျှင်ဤအပိုင်းကိုကျော်သွားနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ, အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? spreadsheets ကြောင်းမှာအများကြီးပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ပါ။
ငါဒီ anti-counter အရာနှင့်ဤမျှခေါင်းမာတယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
သူတို့ကအန္တရာယ်အဖျက်, counterproductive ဖြစ်ကြသည်။
Counters သည်သင်ပြန်လုပ်သည့်အခါတိုင်း“ back to zero” ဖြစ်ခြင်းဟူသောအတွေးကိုအားဖြည့်ပေးပြီးထပ်မံမစတင်မီအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာအကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုလုံးဝမမှတ်မိတော့ပါ။ သူတို့ကပုံတစ်ပုံလုံးကိုမပြဘူး သင်၏တိုးတက်မှုကိုလုံးဝတိုင်းတာရန်နည်းလမ်းလုံးဝမရှိပါ။ ၎င်းသည်ရက်အနည်းငယ်ကိုရှောင်ခြင်းနှင့်သုညသို့ပြန်သွားခြင်း၏အဆုံးသတ်အဆုံးမဲ့သံသရာဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏တန်ပြန် reset အခါတိုင်းသငျသညျ ပို. ပို. စိတျဓာတျနဲ့ unmotivated ဖြစ်လာသည်။
သင်ဘယ်ရောက်နေလဲ၊ fap စိန်ခေါ်မှုများမရှိ (လက်ရှိ ၇ ခုတွင် fap စိန်ခေါ်ချက်မရှိ၊ ပျော်စရာကောင်းသည်)၊ ရက်ပေါင်း ၉၀၊ ရက် ၁၀၀ အစရှိသည်တို့အပေါ်အလေးထားလွန်းသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အတိတ်ကာလ XX ရက်များကိုအမြဲတမ်းမရရှိနိုင်ပါ၊ ထို့နောက်သင့်ကောင်တာက၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်.
Counters များသည်ကောင်းမွန်သောပြေးခြင်းကိုစီမံပြီးသည့်အချိန်မှသာကောင်းမွန်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သင့်အားအောင်မြင်မှုရစေပြီးတစ်ခါတစ်ရံထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းကိုတားဆီးရန်လုံလောက်သောတာဝန်ယူမှုကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် spreadsheets အကြောင်းပြောကြရအောင် Darxidius 'formatငါပေါ့ ကြီးမားသော ၏ပန်ကာ။
- သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသင့်ရဲ့စွဲလမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖြေ - သင်ကတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်မည်မျှရှိသည်ဟုအကြိမ်ပေါင်းများစွာခြေရာခံလေ့လာခြင်းအားဖြင့်၊ သငျသညျပြန်သွားလျှင်, spreadsheet အထူးသဖြင့်ဖိုရမ်နှင့်အတူမျှဝေသည့်အခါ, သင်မူးယစ်စိတ်ဓာတ်လိမ့်မယ်။ ကောင်းမွန်သောစည်းကမ်းချက်တစ်ခုမှာသင်၏အော်ဂဇင်ပမာဏကိုတစ်လလျှင် ၅ လအောက်လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
- သူတို့ကသင်အပြည့်အဝပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ရှုဖို့ခွင့်ပြု။ gameover ရဲ့စကားမှာ:သင်တစ် ဦး တည်းတစ်လကျော်သင်အမှန်တကယ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ pmo သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်အကြိမ်မည်မျှမေ့သွားသည်ကိုသင်မသိပါ။ ငါဟာတစ်လကို orgasm ၃-၄ အောက်လောက်ပဲရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ ၆-၇ ပတ်လောက်ရှိပြီ၊ ဒီလကလည်းမကောင်းဘူး။မင်းဘယ်လောက်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့နေတာလဲဆိုတာကိုသင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။
- သူတို့က "ရေတွက်" အချက်လုံးဝဖယ်ရှားပစ်။ သငျသညျလုပ်ဖို့ရှိသည်အားလုံးတတ်နိုင်သမျှစင်ကြယ်သောစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အေးအေးဆေးဆေးလား။ ရေတွက်ခြင်း၊ နေ့ ၉၀ ရည်မှန်းချက်မပိုခြင်း၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက် ၁၀၀ သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာမျှသာမဟုတ်ဘဲ၊
- သူတို့ကသငျသညျစိတျဓာတျကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ သင် relapse လုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်က၎င်းကို spreadsheet ထဲထည့်ပြီးဆက်သွားပါ။ “ Relapsed again” (သို့)“ တိုးတက်မှုမရှိဘူး” လို့ခေါ်တဲ့ချည်အသစ်တစ်ခုကိုသင်မဖန်တီးပါနဲ့။ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ သင်တစ်လလျှင် ၂၅ ကြိမ်မှတစ်လလျှင် ၂ ကြိမ်မှ ၂ ကြိမ်အထိသွားလျှင်သင်၏ကောင်တာက "၆ ရက်" သာပြောလျှင်ပင်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုသင်လုပ်နေသည်။
spreadsheets သင်တန်း၏, တစ်ဦး taper ချွတ်ချဉ်းကပ်ကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကိုအမြဲတစ်ကြိမ်တစ်နေ့မှာသူကယူ, သင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့စင်ကြယ်ရန်, porn ကိုကြည့်ဘယ်တော့မှရန်ဖြစ်သင့်သည်။
"၌ရှိသကဲ့သို့ချွတ် taperingပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအကြိမ် ၂၀ ကြည့်ခဲ့ရာယခုလတွင် ၁၅ ကြိမ်ကြည့်မည်"ဘယ်တော့မှအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းဒီလိုမျိုးဘယ်တော့မှမစဉ်းစားသင့်ဘူး။ PMO ကိုအစိမ်းရောင်အလင်းမပေးသင့်ပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့သင့်ကောင်တာကို spreadsheet တစ်ခုနဲ့အစားထိုးသင့်ပြီးဘယ်နေ့လဲဆိုတာကိုလုံးဝမေ့ထားသင့်တယ်။ ထို့နောက်သင်ကောင်းကောင်းပြေးရန်စီမံထားပါကတာဝန်ခံမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်ကောင်တာကိုပြန်လည်ထားနိုင်သည်။
(နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြောရလျှင်၊ ရုန်းကန်နေရသူများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၇၀ နေ့တွင်ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော်လည်းသင်ထပ်မံထပ်မံလုပ်မိလျှင် spreadsheet ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ )
ကပြသနိုင်အောင်သင့်ရဲ့လက်မှတ်ကို set up နှစ်ခုလုံး တစ်ဦးကောင်တာနှင့် spreadsheet ။
#1 Step: သင်၏ Google အကောင့်ကို Log ။
အဆင့် ၂။ Darxidius ၏စာရင်းဇယားကိုဖွင့်ပါ ဒီမှာ.
#3 Step: ကိုသွားပါ Copy ကူးပါ ထိုသို့နာမည်တစ်ခုပေး
#4 Step: ကိုသွားပါ Share အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ 'Private' သို့ပြောင်းပါ 'ချိတ်ဆက်ထားသူမည်သူမဆို'.
အဆင့် ၅။ သင်၏ဖိုရမ်လက်မှတ်သို့အောက်ပါကုဒ်ကိုထည့်ပါ ('SPREADSHEET_LINK' ကိုသင်၏အမှန်တကယ်စာရင်းဇယားလင့်ခ်ဖြင့်အစားထိုးရန်သေချာပါစေ):
ကုဒ်: [Select လုပ်ပါ]
အချိန်မရွေးသင်ရုံ Google Docs ကို log in နဲ့ဖွင့်ပါကသင်၏ spreadsheet ကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
စကားမစပ်ကပ်ဖို့ကြိုးစား Darxidius 'format။ လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းဗားရှင်းကိုအသုံးပြုကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ အစိမ်းရောင်ဆဲလ်.
အကျဉ်းချုပ်ပြောရလျှင်“ ပုံမှန် rebooting အကြံပေးချက်”လူကိုဟေ့့ 90 နေ့က reboot လုပျ"အခြေခံအားဖြင့်အသုံးမကျဖြစ်ပါတယ်။
နှင့်အညီ, porn, မတရားသော, တိုကျတှနျးထား, relapsing, စိုက်ထူ, 90 ရက်ပေါင်း, etc အကြောင်းကိုဤမျှလောက်များစွာသောပို့စ်များကိုအောင်ရပ်တန့်ကျေးဇူးပြုပြီး
PS မကြာခင်မှာပဲကျွန်ုပ်သည် forum သို့ feature အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်မည်။ သို့မှသာအတွေ့အကြုံ rebooters သည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များကိုအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရပ်ရွာကိုတစ်ခုခုပြန်ပေးရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မည်။